Phinda ususe izithombe kudivayisi ye-Android yeselula | Izindaba zamagajethi
Ungazibuyisa Kanjani Izithombe Ezisuswe Ngengozi ku-Android
Umbulali Uviniga | | Android, AmaSelula
Inani elikhulu lomakhalekhukhwini elivele ngonyaka odlule linento ebaluleke kakhulu ebenza babe ithuluzi lethu esilithandayo; sikhuluma ngokukhethekile mayelana ilensi yekhamera, isikhathi ngasinye esinokulungiswa okuphezulu ngakho-ke, sinekhwalithi yesithombe esihle kakhulu ezithombeni ezithwetshulwe yile nsiza.
Esinye isici esibalulekile esifakiwe kulezi zingcingo eziphathwayo sise- inkumbulo yangaphakathi nangaphandle, Okufanayo ukuthi ndawonye kungamela amandla amakhulu okugcina zonke izinhlobo zolwazi futhi okugqamile phakathi kwazo, izithombe okungenzeka ukuthi sizigcina ngamandla. Ngeshwa, ukwehluleka okuncane kungadala ukuthi lezi zithombe namafayela ngokujwayelekile kulahleke, lapho umsebenzi wokuzama ukuthola imininingwane eshiwo ngohlobo oluthile lwamathuluzi akhethekile uza, okuthile okuzoxoxwa ngakho kule ndatshana.
Sebenzisa i-Wondershare Dr Fone kusuka ku-Windows ukuthola izithombe ku-Android
Ngeke kube yinto exakile ukwenza lo msebenzi, ikakhulukazi uma sibheka ukuthi inkumbulo yangaphakathi noma yangaphandle exhunywe kwiselula ayilutho ngaphandle kokuthi iyunithi yokugcina encane ebingaphathwa njenge- "hard disk" encane. Uma okwamanje kunenani elikhulu lamathuluzi weWindows angasisiza thola imininingwane ku-hard drive noma amakhadi we-Micro SD, ezinye zalezi zinhlelo zokusebenza ezivela eceleni zingasetshenziswa ngobuhlakani ukuzama phinda uthole amafayela asuswe ngengozi. Ithuluzi legama I-Wondershare Dr Fone ingasenzela imilingo noma kunjalo, kufanele silindele ukuthi ayikhululekile.
Ukuphela kwento okudingeka uyenze ukuxhuma ifoni yakho ephathekayo nohlelo lokusebenza lwe-Android kwikhompyutha ngekhebula le-USB, isimo esingafanele ukumela noma yiluphi uhlobo lwezinkinga ngoba Wondershare Dr Fone, unekhono loku bona inani elikhulu lamatheminali kusuka kubakhiqizi abahlukahlukene.
Lapho sesiyizuzile le nhloso ngosizo lwaleli thuluzi, sizothola ngokushesha isikrini esifana kakhulu naleso esisibeke phezulu. Uhlobo lomsizi omncane yilolo esizokwazi ukulubabaza, esekelwa ngamathebhu ambalwa atholakala phezulu kwesixhumi esibonakalayo sayo.
Isikrini esisibeke engxenyeni engenhla yiso ozothola ngaso esinyathelweni sokugcina, okungukuthi, lapho uzonikeza ithuluzi imvume yokuqala ukuhlaziywa kwangaphambili okufunayo ukuthola kudivayisi ephathekayo; ngokuhamba kwesikhathi kuzofanele ukhethe uhlobo lwamafayela noma izinto ofuna ukusesha, ezizoncika kakhulu kulokho okususwe ngephutha kuselula ye-Android.
Njengoba kukhonjisiwe kusithombe-skrini esingenhla, Wondershare Dr Fone kungasisiza alulame imininingwane enkulu okungenzeka ukuthi isuswe ngephutha, okungaba:
Imiyalezo nokunamathiselwe kwi-WhatsApp.
Imibhalo yezinhlobo ezahlukahlukene.
Ungakhetha ibhokisi elilodwa noma amaningi kuye ngokuthi ufunani ululame kudivayisi yakho yeselula, noma ngabe uzozisebenzisa zonke, kunconywa ukusebenzisa ibhokisi elingezansi kwesobunxele. Enguqulweni yamahhala, imiphumela izokhombisa wonke lawo mafayela asuswe ngephutha, kepha awatholakali uze uthole ilayisense elikhokhelwayo.
Idivayisi yakho ephathekayo ene-Android operating system ngaphambilini kufanele ukuthi "ibigxile", le inqubo elula kakhulu ukulandela ngoba njengamanje kunezicelo eziningi lokho kungakusiza ngalo msebenzi. Umakhi wethuluzi uqinisekisa ukuthi kunamathuba amaningi wokuthola imininingwane esusiwe noma kunjalo, ibuye iveze nokuthi iphesenti elithile layo "belingatholwa."
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ungazibuyisa Kanjani Izithombe Ezisuswe Ngengozi ku-Android
3 amawebhusayithi wokulanda izihloko ozozifaka kuwo Windows 10
5 Izinhlelo Zokuvimba Izingcingo Ezingafuneki ku-Android